बवासीर लागि enema - को मलाशय सम्बन्धित रोगहरु को उपचार को सबै भन्दा साधारण र लोकप्रिय विधि। यो उपचार श्लेम लाग्एको झिल्ली को disinfection लागि अनुमति दिन्छ र सुनिंनु, खुजली र अन्य लक्षण relieves।
विधि मलाशय विभिन्न रोगहरु लागि prophylaxis रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बवासीर लागि Enema, शायद - को pharmacological हस्तक्षेप प्रतिस्थापन गर्न सक्छ कि सबै भन्दा राम्रो उपचार। विधि परम्परागत चिकित्सा लागू हुन्छ, र प्रक्रिया मद्दत बिना घरमा बाहिर गर्न सकिन्छ।
Enemas लागि आवश्यकता
म बवासीर लागि enema गर्न सक्नुहुन्छ? यो प्रश्न यस्तो रोग ग्रस्त थुप्रै मानिसहरूलाई चासो छ। जवाफ हो, तर अझै पनि चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न आवश्यक छ। यो जलन राहत र शुद्ध र mucosa पत्र समान उपचार गरिन्छ। साथै, उपचार सुनिंनु राहत र आंत्र लागि एक preventative उपाय रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै मानिसहरू पहिले डाक्टर परामर्श बिना उपचार सुरु, तर आत्म-दबाइ केही साइड इफेक्ट हुन सक्छ:
विशेष कारण बिना भुँडी दुखाइ।
कुनै कारणले inflamed गुदा सुरु हुन्छ।
बवासीर लागि enema प्रयोगको लागि निषेधित गर्दा यसबाहेक, नियम को एक निश्चित सेट छ।
त्यहाँ पुरानो ulcerative संबंधी बृहदांत्रशोथ छ।
mucosa मा त्यहाँ चर्किएको र क्षरण छन्।
को आन्द्रा मा, तीव्र सुनिंनु आउँदैन।
बवासीर लागि enema गर्न चाहे को प्रश्नको जवाफ, जवाफ हो, तर चिकित्सकको अनुमति संग उपचार र उपचार को दौरान एक यात्रा को लागि हिड्ने राख्न भने मात्र।
Enemas को प्रकार
Enema बवासीर विभिन्न प्रकार प्रयोग गर्न सकिन्छ:
यो औषधिको खुराक।
यो उपचार सुरु गर्नु अघि, रोगी अभ्यास एउटा सानो सेट undergo हुनेछ:
हामी सीधा बन्न र आफ्नो खुट्टा काँध चौडाई अलग राख्नुपर्छ।
एक गहिरो सास लिन र श्वास छोड्नुहोस्। को exhalation शक्ति लागू चाँडै गर्नुपर्छ।
थप श्वसन ढिलाइ र पेट retracts।
नितम्ब मा हात, तल मोड र अलिकति आफ्नो घुँडा मोड गर्नुपर्छ।
यो स्थिति भित्र हावा राख्न सकेसम्म, र त्यसपछि सास सीधा रूपमा लामो हुनुपर्छ।
यस्तो साँस व्यायाम विभिन्न स्थान मा बाहिर छ, एक गणनामा स्थिति बाहेक, साथै पछाडि दुवै पक्षले झूट गर्दा, गर्नुपर्छ। यो अधिकतम दक्षता संग आंत्र सफाई enema लागि अनुमति दिन्छ।
को intestines केवल पानी र हल्कासित नुनीन बाहिर धुन भने पनि अधिक परिणाम हुनेछ।
enema को संरचना
घरमा Enemas लागि समाधान प्रजाति आधारमा विभिन्न तरिकामा तयार गर्न सकिन्छ। निम्न उपकरण सामान्य प्रयोग गरिन्छ:
तातो पानी, लगभग 30 डिग्री।
डाक्टर गर्न श्रेय छन् दबाइहरु।
समाधान तेल आधारमा।
चामल, गहुँ, आलु को स्टार्च को समाधान।
पोषक, अर्थात् ग्लुकोज र भिटामिन पूरक।
बवासीर लागि Enema रोग को छूट समयमा बाहिर गर्नुपर्छ। विशेष गरी यदि योनी रक्तस्राव सँगसँगै, कमजोरीको वशमा पऱ्यौं को मामला मा, उपचार आचरण निषेधित छ।
Enemas सही प्रयोगको लागि एक विधि
विवरण Enemas, कार्यहरूको अनुक्रम को:
म पेट तिनीहरूलाई खींच, तपाईंको बायाँ छेउमा झूठ र खुट्टा मोड गर्न आवश्यक छ।
एक हात संग, चाक धक्का र गुदा मा enema टिप परिचय दोस्रो। यो Vaseline यसलाई चिकनाना गर्न उचित छ।
ढिलो आन्दोलनहरु को enema सामग्रीहरू squeeze।
चिकित्सा को अन्त मा 20 मिनेट को लागि तल झूट रहन।
भने, enema सेट पछि बेचैनी र परिवर्तन मा शुरू हुन्छ, विधि मा छोडेर गर्नुपर्छ।
पेट क्लेंसिंग enema - धेरै साझा उपचार बवासीर को उपचार मलको र ग्याँसहरु को छुटकारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ साथै निम्न अवस्थामा एक नम्बर मा रोग मा कब्जियत, छ यो प्रयोग गरिन्छ:
मैनबत्ती वा लागूपदार्थको enema अप सेट अघि।
क्यान्सर निदान पहिले।
शुद्धीकरण आंत्र enema यो 38 डिग्री2लिटर एक तापमान भएको पानी बग्छ, बाहिर छ Esmarch सर्कल प्रयोग गरेर। अर्को, रोगी माथि वर्णन रूपमा प्राप्त लागि ओछ्यान मा राखिएको छ। टिप गुदा सम्मिलित छ र तिनीहरूले defecate गर्न आग्रह गर्दै सम्म पानी discharged छ। अर्को, तपाईं नरम मलको गर्न आन्द्रा पानी राख्न प्रयास, एक सानो प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ।
यहाँ कसरी आफैलाई वा एक क्लिनिक मा घर मा एक enema गर्न छ।
स्थिर ठूलो प्रचार गर्न कब्जियत लागि प्रयोग तेल enema। यो विधि एउटा तेल को 100 ग्राम लागू रूपमा microclysters छ। आफैलाई लागि घर मा एक enema कसरी बनाउने? यो उद्देश्य, एक पारंपरिक सिरिंज वा रबर टिप संग एक ठूलो सिरिंज लागि।
यो उपचार सूर्यमुखी, तेल, समुद्र buckthorn तेल वा vaseline लागि प्रयोग। कुनै पनि संघटक को intestines आराम सक्छ गर्न 37 डिग्री सम्म खुसीले गदगद हुनुपर्छ। राम्रो सुत्न राख्नु, तेल 10-12 घण्टा भित्र छ।
कब्जियत लागि यो उपचार गर्न, तर तेल भन्दा छिटो छ। यसको मात्रा 100 एमएल थियो। घरमा Enemas लागि समाधान पानी आधारमा गरिन्छ, जो म्याग्नेसियम थपिएको छ गर्न। को आंत्र आन्दोलन को परिचय पछि 10 मिनेट दाह mucosal कारण पछि हुनेछ।
रोग समस्या धेरै ल्याउँछ भने, तपाईं प्रक्रियाहरु शुद्ध पार्नुभएर पछि दबाइ बनाउन सक्छ। यो mikroklizme गर्न भन्छिन् र समाधान बारे 100 एमएल छ। आत्म दबाइ - एक हर्बल decoction। तपाईं औषधि पसल बेचिन्छन् जो जडीबुटी, विभिन्न प्रकारका, साथै चुकंदर रस, आलु रस र सन बीउ प्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
को आंत्र तपाईं समाधान को सबै प्रविष्ट गर्न अनुमति छैन भने, यो सानो खुराक मा थप प्राय बाहिर प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ। औषधि enema निम्न गुण छ:
यो एक bactericidal एजेन्ट छ।
रक्त नली बलियो बनाउँछ।
सुनिंनु कम गर्छ।
तपाईं chamomile प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने प्रभाव अनुवाद गरिनेछ। यो सुनिंनु, सुनिंनु र खुजली हट्नेछ। पानी उम्लिरहेको एक बेकर आवश्यक समाधान तयार गर्न Infuse2चमचा रंग। कहिलेकाहीं पहेंलो भाग संग Glycerol र नुन को एक समाधान थपियो।
उत्कृष्ट दुखाइ र सुनिंनु जडिबुटी wormwood relieves। समाधान तयार गर्न2चमचा हुनुपर्छ उम्लिरहेको पानी4कप पोख्नुहोस्, र त्यसपछि7मिनेट खाना पकाउनु, र त्यसपछि पैन र्याप र Infuse गर्न छोड्न राखे। यो समाधान यसलाई प्रभाव थियो कि PERIODICITY पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हरेक रात प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
रस तपाईं रक्त नली टोन गर्न अनुमति दिन्छ। यो गर्न, सुत्न जाँदै अघि आलु वा चुकंदर रस केही spoonfuls प्रविष्ट, त्यसैले उहाँले सबै रात पेट मा बसे।
सबै जडीबुटी आवेदन अघि पानी र तनाव उबलते जिद्दी गर्नुपर्छ। ग्लिसेरिन कोमलता, साथै भिटामिन लागि प्रयोग गरिन्छ। सबै infusions प्रत्येक अन्य संग मिश्रित गर्न सकिन्छ।
पक्कै, बवासीर लागि enema सकारात्मक प्रभाव छ र तपाईं रोग निको पार्न अनुमति दिन्छ। साथै, चिकित्सा बवासीर को लक्षण को एक रोकथाम र amelioration रूपमा प्रयोग गरिन्छ। चिकित्सा पूरा गर्न निषेधित गर्दा तर परिस्थिति हो:
त्यहाँ आक्रान्त छ।
को पेट सुनिंनु अवलोकन।
त्यहाँ चर्किएको र mucosa को अल्सर छन्।
गर्भावस्था को समयमा, एक enema विशेष गरी डाक्टर को ज्ञान बिना आवश्यक छैन प्रयोग गर्नुहोस्। को बवासीर बारेमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ भने, र एक महिला को सामान्य जीवन संग interferes, यो गर्भवती अनुमति कि लागूपदार्थ मोमबत्ती प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि समस्यामा बच्चाको सुरक्षा विशेष लक्षण र अवस्था आधारित उपचार निदान र सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्छन् चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ।
बवासीर र यसको जटिलताहरू गर्न सकिँदैन उपचार मा घर संग प्रयोग को Enemas बिना चिकित्सा हस्तक्षेप। तपाईं लेखमा प्रस्तुत छ जो सिफारिसहरू र नियमहरू, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै पनि जटिलताहरू एक विशेषज्ञ हेर्नुपर्छ भने। यदि जटिलताहरुलाई स्पष्ट संकेत र दुखाइ असामान्य अवस्थाको एक अबोध्य प्रकृति वा मूल त्यहाँ छन् यो बवासीर को आत्म-उपचार पूरा गर्न निषेध गरिएको छ।
सामान्य कुनै पनि विचलन संग बवासीर को Enemas तुरुन्तै रोकियो गर्नुपर्छ र मात्र मोमबत्ती र अन्य दबाइहरु प्रयोग उपचार भनेर चिकित्सा संकेत हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, यो यस्तो बवासीर रूपमा रोगहरु चुनौतीपूर्ण गर्दा Enemas लागि समाधान को इष्टतम उपचार र रचनाहरूको निर्धारित गर्ने चिकित्सक संग परामर्श गर्न बिल्कुल आवश्यक छ। यस मामला मा, सफलता प्रत्याभूति गरिएको छ।
फूल Echinacea - एक औषधीय बिरुवा, कुनै पनि बगैचा सजाउनु हुनेछ जुन
फिटनेस प्रशिक्षक Elena Sanzharovskaya: जीवनी र फोटो
फोर्ड एस्कर्ट - जारी इतिहास
Patriarchy, यो के हो? त्यहाँ दुई आधारभूत अवधारणाहरु छन्
खेलकुद लघु-क्यालिबर पिस्टल: विवरण, विशेषताहरू, रिजर्भेसन र समीक्षाहरू
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन
तपाईं सुतिरहनु छिटो गिरावट मदत गर्न छोटो सुत्नेसमय कथाहरू
Cenarion अभियान: विवरण गुट र गाइड को प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न